Kuo wuxuu leeyahay in amarada iPhone 13 ay ka badan yihiin 12 -ka, marka lagu daro waxaan sii wadi doonnaa kayd yar | Wararka IPhone
Kuo wuxuu leeyahay in amarada iPhone 13 ay ka badan yihiin 12, marka lagu daro waxaan sii wadi doonnaa kayd yar
Mid ka mid ah dhibaatooyinka maanta shirkad kastaa la kulmi karto waa tan aan haysan kayd alaab si aad wax badan u iibiso. Waqtiyadan yaraanta soo -saareyaasha, balaastikada, qoryaha iyo guud ahaan alaabta ceyriinka ah ayaa ah amarka maalinta oo waxaan ku aragnaa shirkadaha baabuurta, guud ahaan warshadaha iyo dabcan, sidoo kale shirkadaha tiknolojiyadda.
Xaaladdan oo kale, falanqeeyaha caanka ah ee Ming-Chi Kuo, ayaa warbixintiisii ​​ugu dambeysay ku sheegay in shirkadda Cupertino ay dhibaato soo gaari doonto yaraanta saamiyada ee iPhone 13 Pro illaa Nofembar ugu dambayn. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale sheegaysaa in baahida loo qabo moodooyinka cusub ee iPhone 13 ay ka badan tahay kuwii ay heleen moodooyinkii hore, iPhone 12.
Saddex maalmood kadib markii boos celintu bilaabatay adeegsadayaasha xiiseynaya inay iibsadaan iPhone 13, Kuo wanaagsan wuxuu ku muujinayaa war -saxaafadeedkiisa maalgashadayaasha in baahida ayaa sare u kacday markii hore y kuwaas oo sii wada filashooyinka suuqa ee la dejiyey ka hor bilowga iibinta ama halkii boos celin.
Kuo, wuxuu sharraxayaa in dalabka hore ee amarrada iPhone 13 Pro iyo iPhone 13 Pro Max uu aad uga sarreeyo kan iPhone 13 mini iyo iPhone 13. Dhinaca kale, iyo dhibaatooyinka sahayda ee adduunka oo dhan, wuxuu ku doodaa in falanqeeyahaani in shirkaddu dhibtoon doonto dib -u -dhaca maraakiibta illaa Nofembar badiyaa moodooyinka iPhone 13 Pro iyo Pro Max.
Tani waa wax horeba u dhacay sanadkii hore oo laga yaabo inay sidoo kale ku dambayso inay dhacdo sannadkan, maadaama ay tahay tan ugu badan ee la dalbado iPhone bilowga. Waxa cad ayaa ah in saadaasha Kuo ay ku dhowdahay shixnadaha iPhone iyo macno ahaan ayaa la filayaa inuu kordho 16% sanadka marka la gaaro 2021 mahad waxaa iska leh suuqa Waqooyiga Ameerika iyo diidmada qayaxan ee shirkadaha sida Huawei.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » Kuo wuxuu leeyahay in amarada iPhone 13 ay ka badan yihiin 12, marka lagu daro waxaan sii wadi doonnaa kayd yar
iMac 2021 oo ah 1.299 euro, AirPods Max 509 euro iyo dalabyo kale oo ku saabsan Amazon ee alaabada Apple